भ्यालेनटाईन डे, साकुरा र तिम्रो मेरो कथामा मारिया सानहरू |
प्रकाशित मिति :2019-11-19 13:36:53
आज फेरि माघे झरी पर्‍यो । भर्खर अस्ती मात्र त हो पुसे झरी परेको । लागेको थियो अब चिसो खत्तम, गर्मी सुरु । धत् फेरि प¥यो त पानी । उहुहु जाडो त के सारो हौ । थिरथिराउँदै म सिरकभित्र गुटमुटिएँ । आफू मात्र स्वतन्त्र पत्रकार, बेतलवी काम गर्ने श्रमजीवि । त्यसैले धेरै जिम्मेवारी भएता पनि काम सकाउन त्यति सारो हतारो छैन । तर काम चोर र अल्छे भने म होईन है ।
हो आज भ्यालेनटाईन डे । प्रेमीहरूले एक अर्कासंग प्रेम साट्ने र मन परेकालाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन । अचेल किन हो यस्ता प्रेममय दिवसहरूका बारेमा मलाई खासै चाँसो हुदैन । बिहानदेखि परेको झरी न मेरो लागि रोमान्स बनेको छ, नत खास नै । बरू यी यस्ता दिनहरू म बिर्सन खोज्छु, बिर्सेको राम्रो लाग्छ भनम् ।
हो यस्तै झरीलो दिन थियो, म हिसाईबाट काम छोडेर तिम्रामा आउँदा । चुमा डेढ घण्टा ट्रेन कुरे पश्चात म खुवानामा हाम्रो अर्पाटतिर हानिएँ । मन एकोहोरो थियो । केही खुशी र दुःखका भाव उतार चढावमा म विगतका जापान बसाईका सुख दुःखलाई हिसाब किताबमा जोड्दै थिएँ । रातको आठ बज्दै थियो, झम्झम् पानीमा सेकी खामेयामा हुँदै ट्रेन हुँइकिरहेको, कानमा हेडफोनमा गुञ्जी रहेको गीत, ‘तिमीलाई म भुल्न सक्दिन, जहाँ जाउँ तिम्रो याद आईरहन्छ, मेरो नेपाल मेरो नेपाल….।’
हो रुझिलो रातमा मलाई मेरो नेपालको सम्झनाले निकै अत्यायो । लाखौंको कमाई र सुविधा सम्पन्न यो सुकिलो देश मलाई खासै आकर्षक लागेन र गन्तव्य बन्न सकेन । लाखौं नेपालीसहितको यो आप्रवास मात्र मेरो लागि कर्मथलो बन्यो, तर जीवनको ध्यय र गन्तव्य बन्न सकेन । किन किन यो मन संधै नेपाली नै बन्ने गर्छ मेरो । म मात्र होइन, सबै नेपाली आप्रवासीहरूका आँखा र हृदयमा म नेपालको बासना देख्ने गर्छु । विशेष परदेशका मानवताविहीन भाकाहरूमा नेपाली माटोको हरहराउँदो वासनाले अधिकाँस नेपालीहरू हुरुक्क भएको देख्छु । नेपालमा हुँदा विकासको नाममा पनि भूगोल र जाति विशेषको गन्धमा रुमल्लिएका जमात पनि किन हो परदेशमा त एक अर्काका पुरुक जस्तै बन्छन्, हुन्छन् । शायद आफ्नोपन र आफ्नोको भावना जगाउन, हुर्कन एकपटक परदेशी माटोमा विदेशी गाईजिन हुँदाको दुःख बेहोर्न पर्ने नै हो कि, सोच्न आउछ कैले कैले । राजु लामाका देश भक्तिका गीतमा बहकिँदै लामबद्ध ट्रेनहरूको आगमन र त्यसको प्रकाशले झरीका पानीहरूमा परेका झिल्कामा भिज्दै ट्रेन हुँइकिरह्यो ।
ओहो अब त अठार दिन बाँकी मेरो नेपाल फर्किने । किन्नु त खासै छैन । तर नानीहरूका लागि कपडा फाटा लिन बाँकी नै छ । कपडा सम्झिने बितिक्कै मलाई मारियाको याद आयो । काम छोडेर आउँदा मेरो हातमा तीन मान राख्दै, खोदोमोनाका वके ? भन्दै अंगालो हालेकी थिईन, नचाहेर पनि मेरा नयन द्रवित बने । मारिया सान ।
हो मारिया उनको नाम । थर केहो थाहा छैन, चासोको विषय नि बनेन कहिले । आमा जापानीज बुबा ब्राजिलका । दोश्रो विश्व युद्धमा लाखौंका संख्यामा जापानीजहरू विस्थापित बने । युद्धको मारमा विस्थापितका लर्कोमा मारियाकी आमा पनि परिन ब्राजिलतिर । अहिले युद्ध सकिएको पनि आठ दशक भइसक्यो । जापानमा विकास तिव्र गतिमा उकालिएपछि द्वन्द्वका कारण विस्थापित आफ्ना नागरिकलाई जापान फर्काउन र विकास कार्य उद्योग धन्दामा सघाउन नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो देश आवत्जावत् गर्न खुल्ला वातावरण दिने गरेको छ । त्यसैले त थुप्रै मारियाहरू आफ्नो थातथलो फर्किदै देश विकासमा सघाउँदै छन् । देश क्रमस उँभो लाग्दै छ ।
मारियाका कथाहरू सम्झिरहँदा मेरो मन अनायासै अमिलो बन्यो । नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा मारिया जस्तै लाखौंका संख्यामा परदेशिएका नेपाली चेलीहरूका बारेमा मेरो नेपालका नेताहरूलाई भने यो नजीर उल्टो बनेको छ । अहिले सुन्छु, द्वन्द्व सल्टिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार जापान लगायत तेश्रो राष्ट्रमा आफ्ना नागरिक श्रमिकका रुपमा भर्ना गर्न गराउँन तँछाड मछाड गर्दैको स्थितिमा छ । त्यसमा पनि नातागोता आफन्त इष्टमित्र, साली साला कार्यकर्ता क–कसका भागमा पुग्ने हो वा होईन मात्रैको चिन्ता । आम पहुँचविहीन नेपाली हेरेको हे¥यै । धन्य नेपाल ! धन्य नेताका नीति ! आखिर नीति नै त रहेछ, कोइ अर्काको देश बनाएर पेट पाल्छ, कोइ अर्काको पेट पालेर देश बनाउँछ । फरक नीति र सोचकै त रहेछ नि ।
हो मारिया तिनै विस्थापितकी छोरी । उमेरले पचास टेकेकी भए पनि खान्की र स्वस्थ्य जीवन शैलीले होला उनी भर्खर ३५ टेकेजस्ती । अग्लो र गोरो वर्णको शरीर । हमेसा काममा दरिइरहने । सफा चिटिक्क परेर बस्ने, उज्यालो हँसिली, फरासिली मारिया । हाम्रा टीम लिडर । काममा एक दम अनुशासित । उनी हामीलाई हरेक दिन काम शुरु गर्नु भन्दा अगाडिको व्यायाम पश्चात् सम्झाउँथिन्, सम्झ यो तिम्रो कम्पनी हो । यो तिम्रो काम हो । यो बिग्रे मेरो काम बिग्रन्छ, मलाई घाटा हुन्छ । मेरो कम्पनी डुब्छ, यस्तै यस्तै । हामी मनमनै त्यस्तै दोहो¥याउँथ्यौं । त्यसैले होला हामी श्रमिकहरू कम्पनीको कामलाई बडो प्रेमपूर्वक सल्टाउँथ्यौं । बिग्री हाले नडराई सजाय खान तयार हुन्थ्यौं । काम बिग्रदा कहिले गाली मात्र गर्थे, कहिले सजाय पनि पाईन्थ्यो । यो नियम सबैमा लागु हुन्थ्यो के जापानीज, के गाईजीन (विदेशी) । सबैलाई एउटै नियम एउटै सजाय । अनि कहिले कम्पनीलाई नाफा हुँदा मिठाईका बक्सा आउथे । नभए कम्तीमा जुस ओच्या वा कफी । जे होस् काम गर्ने वातावरणमा आफ्नोपन थियो । कामको बोझ जति भए पनि मालिक र मजदुरको भावना र दुरी नरहँदा कामको थकाई भुलिन्थ्यो पनि । मारियाको काम गराई र उर्जा देख्दा गजब लाग्थ्यो ।
म गर्वका साथ श्रीमानसंग प्रेम साट्थें । शायद चारियाचाहिँ मरेर बाँच्दै बाँच्नका लागि मर्दै प्रेम साट्थिन् । बिचरी ! दिनभर खाइसाको काम पश्चात म श्रीमान्संग दुःख सुख बाँड्थें । उनलेचाहिँ कहिले आफ्ना दुःख दर्द साट्न सक्दिनन् । न त कथित प्रेमीसंग, न कामदारसंग । जसले उनलाई प्रेमिकाको दर्जा भन्दा माथि कहिल्यै राख्दैन र राख्ने आँट पनि गर्दैन ।
बिचरी मारिया ! सन्तान नभएकै कारण पतिबाट परित्याग गरिएकी । मारियाका आफ्नै कथा छन्, व्यथा छन् । उनका प्रेमी एजेरुका कथा पनि कम मार्मिक छैनन् । आमाद्वारा परित्याग गरिएका एंजेरु (एंजेल)सडक बालकका रुपमा हुर्किए । टुरिष्ट भिसामा जापान भित्रिएका एजेरु मारियासंगको प्रेममा यतैका बने । भिसा छैन, बिहे गर्न मारिया मान्दैन । शायद पहिलो पतिको परित्यागले गहिरिएको मारियाको घाउ अझै पुरिएको छैन । किन बिहे नगरेको भन्दा भन्छिन् “हामी संगै त छौं, बिहे किन गर्नु प¥यो ?” मारियाको दुःख मिसिएको चिसो जवाफ ।
दुई वर्ष जापान बसाईमा थुप्रै मारिया भेटिए । ती मध्य केही नेपाली थिए त केही विदेशी । तर ब्राजिल र जापानीको रगतको सम्मिश्रित यो मारिया मेरो मनमा गहिरिएर बसिन् । उनी मेरी आमा थिईन् एक हिसाबले । मारिया फगत कसैकी प्रेमिका । कसैकी उधारो मन बहलाउने साथी । कामदार महिला स्वदेशी होस् वा विदेशी सबैका काउन्सुलर उनी । म मनमनै दुःखी बन्थे, उनको जीवनलाई मनन् गर्दै । कहिलेकसो भावुक बन्थें, आखिर म पनि त महिला थिएँ, परदेशिन बाध्य पारिएका र परेका मध्य ।
सेप्टेम्बरको साँझ म काम सक्न हतारमा थिएँ । घडीमा कतिबेला पाँच बज्ला हेर्दै हतार हतार सामान समेट्दै गर्दा मारिया दगुर्दै आईन् र भनिन्, ‘ताईफु आउदै छ । ट्रेन स्टेशन बन्द छ । तिमी यतै आफ्नो कोठामा बस । अपार्ट नफर्क’ मारियाको उर्दी । कामदारहरू मध्य म मात्र खाइसा भन्दा दुई घण्टा ट्रेनबाट पर बस्थें । मारियाको उर्दीले मेरो मन अमिलो बन्यो । दिनभरीको कामको थकानपछि बल्ल श्रीमानसंग सुख दुःख साटासाट हुन्थे हाम्रा । विदेशमै भए पनि बिहानको चियादेखि खाजा खानासम्मकोे व्यवस्था गरेर हिँड्ने मेरो नेपालदेखिको दिन चर्या । कामको थकाईले खाने समेत मन नगरेर सुत्ने उनको बानीले मलाई सारो पिरोल्थ्यो । त्यसमाथि दिनको एक पल्ट नेपालमै छोडेका नानीहरूसंग बाबु आमा संगै बसेर बात मार्ने । उनीहरूका मिठा तिता कुरा सुन्ने, सुनाउने हामी बुढाबढीको दिन चर्यामाथि ताइफुले तगारो लाउँदा नरमाईलो बन्यो मन । मन नलागी नलागी म खाईसाको मेरो कोठामा छिरें । पल्लो कोठाकी बहिनीले माया गरेर खान बोलाईन् । गुन्द्रुक, सिन्कीको झोल, भात, सुंगुरको मासु । हरहराउँदो नेपाली घिउसहित भात पस्किदिइन् । मन अपार्टतिरै थियो, श्रीमान तिरै थियो । मन नलागी नलागी गाँस टिपेर म सुत्नतिर लागें ।
कतिबेला खुवाना पुग्यो पत्तै भएन । केही मन अमिलो त केही खुसी मिश्रीत भावसहित अपार्ट पुगें म । खोई किन हो नेपाल फर्किने दिन नजिकै होला महेशले मलाई अधिक समय दिन खोजेको महशुस गरें । उनी त कोठामा पहिले नै पुगेर खाना बनाउँदै रहेछन् । मलाई देखेर बोलें “आज वातासीमा सेल रैछ । नानीहरूका लागि राम्रा राम्रा कपडा छन् । सपिंग जाने होइन ?” अ हेरम् खाना खाएपछि मुड् कस्तो हुन्छ । हातको झोला भूइँमा राख्दै जवाफ दिएँ मैले ।
राती सुत्ने बेला किन हो फेरि मारियालाई सम्झिएँ । त्यो रात म कति बेला निदाएँ पत्तै पाइन । मारिया सान मारिया सान ……कसैको आत्तिएको आवाजले म बिउँझिएँ । आवाज माथिको कोठाबाट सम्झनाको थियो । अर्ध निद्रामा म हतपत्त उठें । तर ढोकामा पुगेर ढोका खोल्न हात लम्काएंँ तर खोल्ने हिम्मत भएन र अडिएँ । पल्लो कोठाबाट मारिया हत्तपत्त निस्केको सुनियो । आवाज कोई पुरुष र मारियाको थियो । एक छिन कोसंग मारियाको जापानी भाषामा भनाभन् भएको सुनियो । करीब १० मिनेटको गलफत्ती पछि को हो लड्खडाउँदै भ¥याङ्गबाट झरेको सुनियो । लगत्तै मोटर स्टार्ट भयो र हुँइकियो । म बिस्तारै हिम्मत गर्दै मारियालाई फोन गर्न फोन लिन टेबलतिर लम्किदै थिएँ । मेरो कोठाको ढोका ढक्ढकायो मारियाले । “कोपिला सान हायाक” …..। किन होला ? मैले सशंकित हुँदै ढोका खोलें । मारिया संगै थरथराई रहेकी सम्झना मारियाको अंगालोमा थिईन् । सानी नानी जस्तै डर र त्रासमा थिइन् सम्झना । तर किन ? तिमी यसलाई (सम्झनालाई) एक छिन समात त । भन्दै मारियाले कसैलाई फोन गरिन् ।
होइन किन नसुतेर टोलाइरा ? महेशले आँखा मिच्दै अचम्म मान्दै हेर्दै बोल्यो मसंग । परदेशी भूमीमा कतिपय घटनाहरू श्रीमानलाई भनि रहन पनि सकिन्न । आफ्नो देशमा व्यवहार मिलाउन परदेसिंदा कतिपय अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आईपर्छन् । कामको तनाव, सहकर्मीहरूसंगको लफडा । सबैसंग जुझ्दै काम सकेर दुई घण्टा रेल र साईकल हुँदै घर पुग्दा आँत हुरुक्कै भई सकेको हुन्छ । त्यसैले पनि होला घर पुगेर फेरि दिन भरको तनाव महेश सामु पोखेर रहेको रातलाई पनि संगीन बनाउने कतै मन हुँदैन पनि ।
बिस्तारै डराउँदै सम्झना कोठाभित्र छिरिन् । उनी घुँक्क घुँक्क रोई रहेकि थिइन् । ‘के भो खासमा ?’ मैले सोधें । ‘काम मात्र गरेर नपुग्ने, हामीलाई के सम्झेको यो मालिकले । शरीर बेच्न परे त बम्बै जान्थें नि बेचिन । किन लाखौं खर्च गरेर आउँथ्यौं र दिज्यु’ आफ्नो अनुहार हत्केलाले छोप्दै भक्कानिइन् सम्झना । एउटा महिलाका तेश्रो नेत्र पनि हुन्छ । मलाई परिस्थिति बुझन् समय लागेन । हुन त जापानीहरू महिलाहरूलाई निकै सम्मान गर्छन् । खाईसामा लैंगिक हिंसाको नामसम्म हुँदैन जापानमा । बरु संगै काम गरेका सहकर्मी र सह देशीहरूबाट पीडित हुनु पर्छ नेपाली लगायतका गाईजीन महिलाले ।
सम्झना हो उसको नाम । घर पश्चिम नेपाल । अहेब पढ्न काठमाडौं छिरेकी । माओवादी द्वन्द्व चुलेको नेपालको राजनैतिक अवस्थामा गामदेखि भागेर काठमाडौं पढ्न बसेकी । गाउँका कयौं साथी माओवादीतिर लागे । भेउ नपाउँदा आफ्नो डेरासम्म बास माग्दै आएका माओवादी साथी र दिनहुँ जस्तो सशस्त्रले शंका लागे घर घरमा आई खोतल्ने त्रसित माहोल । त्यसमाथि काठमाडौंको थेग्नै मुिस्कल महंगाई । गाउँबाट आमाले पठाएको साग, गुन्द्रुकका सुकुटी, मकै, कोदाको आटो र घर भाडा र केही नीजि खर्चलाई पठाइएको खर्चले पाहुना पाल्न कम्ता मुस्किल थिएन सम्झनालाई । सम्झना मात्र किन र ? काठमाडौंको महंगाइमा पढेर केही गर्न बसेका हरेक डेरावालको नियति र कथा यस्तै त हो । अझ बिरामी बनेर काठमाडौं जचाउन आएका पाहुनालाई अस्पताल धाईदिने र उस्तै परे कुरुवासमेत बसिदिनु पर्ने बाध्यता । काम परेर सहयोग गर्न नसकेको अवस्थामा गाम घर फर्केर ‘फलानाका छोरा, बुहारी, छोरीले त पानी पो बारुला झैं गरे गाँठे’ भन्दै कुरा काटेकासम्म सुन्न पर्ने विवशता छ–काठमाडौं बाहिरका डेरावालहरूलाई । अझ घरबेटी उस्तै विवेकहिन परेमा खानु पर्ने खप्की बेग्लै । शायद यी यस्तै कारण हुनु पर्छ सम्झनाहरू अहेबको लोभ लाग्दो भविश्य छोडेर परदेसिनुको ।
मलाई त्यति मात्र थाहा छ । अरु सोध्ने कुरा पनि भएन । व्यक्तिगत जीवन र ठाउँ ठहर सोध्ने परिपाटी छैन विदेशमा । त्यो रातभर सम्झना सुतिनन् । मैले पनि उकुसमुकुसमै रात बिताएँ । निद्रा लाग्ला जस्तो हुन्थ्यो तर छिनछिनमा सम्झनाको झस्काइले म ब्यूँझि हाल्ने । आमाको काख र बाबुको सुरक्षाबाट टाढिएर बिदेसिनु परेका सम्झनाहरू जस्ता किशारीहरूका रात शायद यसरी नै झस्केर बित्दो हो, जहाँ पनि र जहिले पनि ।
दिनभर खाइसामा जोतिएर रातमा एकछिन् एजेरुहरूसंग स्नेह बाँडेर जिउने मारियाहरूको मन हुदैन, र मन हुनु पनि हुदैन । मात्र मेसिनसंग जुधिरहने भएरै होला मारियाहरू मात्र फगत मेसिन जस्तै । अनि मनविहीन मारियाहरूमा फेरि पनि मन र विवेक हुने गर्छ सम्झनाहरूका लागि, तर फेरि आफ्नो लागि मात्र फगत मेसिन मन ।
भोली पल्ट खाइसामा कम्पनी मालिक नआएको अनुमान् मैले मेरो काम गर्ने छेउका कोठामा मालिकको खाली कुर्सी देखेर ठम्याएँ । सम्झना अपार्ट मै सुतिरहिन् । मारियाले किन हो त्यो दिन हामीलाई केही निर्देशन पनि दिइनन् । काम शुरु हुन नियमित गरिने व्यायाम र निर्देशन केही भएन । कामको बीचमा मारियाले मलाई कानमा खुसुक्क भनिन् । “कसैलाई केही नभन्नु, म पनि काम छोड्दै छु है, अब नगर्ने यता ।” शायद आफ्ना कामदार महिलामाथि मालिकले गरेको दुव्र्यवहारले निकै दुःखी थिईन् मारिया । त्यो मारिया जसलाई हरेक श्रमिकहरू एजेरुसंग लिभिंग टुगेडर गरेकै विषयलाई जोडेर चरित्रहिन भन्थे । हो मारियाले काम त छोडिनन् । तर सम्झनामाथि भएको दुव्र्यवहार विरुद्ध कम्पनी मालिकको खुलेरै विरोध गरिन् । मारिया जो आफै पीडित थिइन्, श्रीमान् र समाजबाट । तर कसैको आत्म सम्मानका लागि लडिन् । मारियाले मात्र महिला भएकैले लडिदिइन्, स्वदेशी वा विदेशी उनलाई मतलब भएन । त्यसपछिका दिनहरूमा के कस्ता घटना घटे थाहा भएन । म नेपाल फर्कें आफ्ना नानीहरूका लागि । तर जबसम्म बसें मारिया सानको गर्विलो काखमा आत्म सम्मान जोगाउँदै आफ्नो देश र परिवारका लागि आर्थिक जोहो गर्ने अवसर प्राप्त गरें । साधुवाद मारिया सान् ।
आज भ्यालेन्टाइन डे फेरि । पक्कै साकुराका फूलका कोपिला पलाउँदै होलान् जापानमा । महिला अधिकारका लागि सरोकार राख्ने कुनै संगठनसंग पनि आवद्ध छैनन् मारियाहरू । तर आफू मरेर बाँचीरहेका मारियाहरू सम्झनाहरूका सुख दुःखमा सधै बलियो खम्बा बन्ने गर्छन् । तर मारियाहरूका आफ्नै कथा कहिले लेखिदैनन् । न त खोजी हुन्छ मारियाहरूको कसैबाट ।
कहिलेकाहीँ लाग्छ संसारमा सबैभन्दा दुःखी प्राणी महिला । विगतका राज्य सत्ताले आम जनताका भावना र माग सम्बोधन नगरेकै कारण उब्जेको दश वर्षे द्वन्द्व नहुँदो हो त सम्झनाहरूले विदेसिन बाध्य हुनु पर्थेन । अनि कहिले लाग्छ, सशस्त्र द्वन्द्वको अवसानको यो चौध वर्ष पछि पनि राज्य संयन्त्रले महिलाहरूका लागि एउटा लोभ लाग्दो व्यवसायको खाका किन कोर्दैन । अझैं किन वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्छ यो सरकार र राज्य संयन्त्र ? ‘पाले पुन्य मारे पाप’ को कसम खाएर भित्र्याएकी आफ्नी श्रीमतीलाई पैसा कै लागि किन विदेसिन बाध्य पार्छन् श्रीमान्हरू ? अनि कहिले लाग्छ, महिलाहरूलाई सोधुम् किन आफ्ना काखका नानीहरूका आँखाभरी बलिन्द्र आँसु बनाएर आफ्नो घरवारीलाई अलपत्र पारी दुई पैसा कमाउनकै लागि विदेशिन बाध्य छौ ? तिमीहरू मध्य कोइकोइ मात्र सम्झना जस्ता भाग्यमानी हुन सक्छन्, जसले मारियाहरूको स्नेह र बलियो छहारी पाउन सक्छौ । आफै जलेर प्रकाश दिने मैनबत्ती जस्ता मारियाहरू यो संसारमा धेरै कम हुन्छन्, हेक्का राख्नु । डोजो मारिया सान । आनाता किरेइ ।